China Hoodie ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọhụụ
Ndị a nwere ike idozi nwere ụdị buru ibu, nke bara uru na nke nwere nnukwu obere akpa, dị ka ọsụsọ akwụkwọ ochie. Kidsmụaka, ndị ntorobịa, na ndị toro eto ga-enwe ekele maka ime ahụ dị nro na ịkapụ akara olu. Ngwakọta polyester owu na-egosi na ha agaghị enwe ike ịda mbà.
1.Hoodies ndị a na-ahụkarị nwere nnukwu, ọkpọka dabara adaba na obere akpa obere akpa, dị ka sweatshirt ụlọ akwụkwọ ochie. Kidsmụaka, ndị ntorobịa, na ndị toro eto ga-enwe ekele maka ime ahụ dị nro na ịkapụ akara olu. Ngwakọta polyester owu na-egosi na ha agaghị enwe ike ịda mbà.
2.Na ihe karịrị agba 20 dị, ndị a na-achapu ọkụ hoodies dị njikere maka otu ma ọ bụ ihe omume pụrụ iche. Ha na-abata na agba agba elekere anya, kwa, nke mere ha zuru oke iji hazie klọb gị na-agba ọsọ ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ n'èzí.
sentimita asatọ Nha S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ogologo 26.5 Ogbe 27.5 28.5 29.5 30 30.5 31
obosara 20 22 24 26 28 30 32
Nke gara aga: omenala ebipụta oghere polyester na-agba ọsọ t uwe elu logo
Osote: N'ogbe polyester spandex Mens egwuregwu track gbatia mgbatị ọsụsọ ogologo ọkpa na n'akụkụ straipu
Ahaziri Hoodies E Bipụtara